Xisbiga SD oo M taageero kaga sita nawaaxiga Koonfureed ee dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaydka sawirrada. sawir: Alexander Larsson Vierth/TT
La daabacay tisdag 5 december 2017 kl 13.06
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa ku haysta taageero ka sarreeysa xisbiga Moderaterna nawaaxiga Koonfurta ee dalka Sweden, hase yeeshee uu xisbiga Vänster-ku kaga sito xisbiga SD gobolka Stockholm. Sidoo kale wuxuu hoos u dhac ku imanayaa taageeradii xisbiga MP ee waqooyiga caasimadda.
Waa markii ugu horreeysay oo ay hayadda SCB saadaalinta tira-koobkeeda ku sii jejebiso taageerada bulshadu u hayso xisbiyada ee gobollada, waa haddii ay dalka doorasho ka dhici lahayd maanta.
Saadaalinta tira-koobka SCB ayay ka muuqatay inay taageerada uu xisbiga SD ku leeyahay nawaaxiga koonfureed (gobollada Blekinge iyo Skåne) uu kaga sarreeyo xisbiga Moderaterna. Xisbiga SD ayaa gobolladaa ku helay taageero gaarsii-san 20,5%, halka uu xisbiga Moderaterna ku hantiyay taageero gaarsii-san 19,7%.
Xisbiga SD ayay taageeradiisu ugu liidataa degmada Stockholm, iyadoona uu xisbigu ku helay taageero ah 8,6%. Hase yeeshee uu xisbiga Vänster-ku ku leeyahay degmada Stockholm taageerada ugu culus 12,5%. Nawaaxiga Småland ayuu xisbiga Vänster-ku ugu taageero liitaa 3,1%.
Nawaaxiga Småland ayaa ah sal-dhigga ugu culus ee xisbiga Center-ka (12,7%), iyo xisbiga KD (5,7%). Xisbiga Liberalerna ayaa taageerada ugu ballaaran ku leh gobolka iyo degmada Stockholm 6%.
Xisbiga Socialdemokraterna ayaa ah xisbiga ugu dhumucda wayn gobollada dhammaantood kolka laga reebo gobolka Stockholm oo uu kaga sito xisbiga Moderaterna. Xisbiga Socialdemokraterna ayay dhumucdiisu ugu wayn tahay waqooyiga iyo bartamaha Sweden iyo sidoo kale bartamaha iyo waqooyiga fog oo uu ku leeyahay taageero gaarsii-san 42,7 iyo 42,3% sida ey u kala horreeyaan.
Xisbiga Miljöpartiet ayaa ku helay taageero hooseeysa dhammaan gobollada dalka. Nawaaxiga koonfurta illaa laga soo gaaro magaalada gobolka Stockholm oo keliya ayuu xisbigu ku helay taageero kor u dhaafeeysa 4%. Degmada Stockholm iyo bartamaha waqooyi ee dalka ayuu xisbiga MP ku helay taageero ka hooseeysa xadka oo gaarsii-san 3,3%.